Odayaasha ka soo Jeeda Dhusamareeb iyo Cadaado oo Heshiis hor dhac ah ka gaaray Dagaalkii Xanan-buurre. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Odayaasha ka soo Jeeda Dhusamareeb iyo Cadaado oo Heshiis hor dhac ah...
Odayaasha ka soo Jeeda Dhusamareeb iyo Cadaado oo Heshiis hor dhac ah ka gaaray Dagaalkii Xanan-buurre.
Wararka ka imaanaya Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in heshiis laga gaaray Colaadii deegaanka Xanan-buurre.
Odayaasha ka kala soo jeeda dhinacyadii ku dagaalamayey deegaanka Xanan-buurre iyo qaar ka mid ah mas’uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa ku guuleystay colaaddii halkaasi ka taagneed in heshiis horudhaca laga gaaro.
Odeyaasha waxay sheegeen in wixi hadda ka dambeeya iney u gudbayaan sidi xal kama dambeys ah colaaddaasi looga gaari lahaa.
Salaad Cali Rooble oo ka mid ah odayaashii heshiiskaasi qaybta ka ahaa ayaa BBC-da u sheegay in hadda lagu guuleystay in la joojiyo xabadda isla markaana la sameeyay guddi ka kooban labada dhinac si heshiis kama dambeys ah looga gaaro xaaladda.
“Waxaa hadda ka hor lagu jiray in xabadda la joojiyo ciidankana la kala qaado ayadiina waa lagu guuleystay, waxaa la sameeyay guddi dhexdhexaad ah oo ka socda labada beelood iyo maamulka ka kooban in aan wax dambe meeshaas ka dhicin”
Previous articleKu dhawad 7 dhalinyaro Sooamaliyeed oo lagu diley gobolka Eastern Cape ee dalka Koonfur Afrika 24 kii saac ee lasoo dhaafay.
Next articleShir ka furmaya magaalada baydhaba oo ay iskugu imaan doonaan Xubno ka socda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka.
dadka u dhintay cudurka Covid-19 oo kor u dhaaftay saddex milyan...
Siyaasi Ibraahim Dheere Codkaada wax buu badali karaa